Amachweba weZitolo Zangaphandle Agcwele Kanye Nezindawo Zokuhlala Ezingu-3x6m Ezinetende Sidewalls neGreenhouse | I-Winsom
Amachweba Wezimoto Angaphandle Nama-Shelter 3x6m Anamacici Side
10-29 Izingcezu Izingcezu ezingama-30-49 > = Izingu-50
Le canopy yemoto ilungele ukuhlinzeka indawo yomthunzi nendawo yokubeka yezimoto zakho, ama-mopeds, amabhayisekili noma ezinye izinto zangaphandle. Ungayifaka futhi ngemuva kwesakhiwo sakho njenge sunshade enkulu, enhle yokujabulisa umndeni wakho nezivakashi.
1) Uhlaka lwensimbi emhlophe oluhlanganiswe ngensimbi, ukugqwala kanye nokugqwala okuqinile.
2) Izinkinobho zentwasahlobo ekuhlanganeni kokusetha okulula nokuthatha phansi.
I-3) Isembozo esiphakeme sesine-hot-sealed, i-waterproo.
Inombolo Model WS-CS136
Igama lento Amachweba wezimoto angaphandle namaSherter 3x6m anama-Sidewalls
Usayizi Womkhiqizo I-10x20ft (3x6m)
Umbhalo ongaphezulu I-180gsm PE
Izinto zokubhala I-160gsm PE
Uhlaka lwe-spec. Dia 42 * 1.4 / 38 * 1.0mm amashubhu wensimbi nge-white powder camera
MOQ Izingcezu eziyi-10
13x20ft (3x6m) Umdwebo Wobuchwepheshe
I-10'X20 'carport ifaka okungaphezulu kwamanzi, ukushisa okuvaliwe okuvaliwe okuphekwe nge-polyethylene kanye nohlaka lwensimbi engu-38mm Diangle olufakelwe igesi ukuqiniseka ukuvikelwa kwamafomu, ukukhonkotha nokugqwala. Lokhu kulula ukusetha i-carport kulungile ukuhlinzeka ngomthunzi nokugcina emotweni yakho, isikebhe, noma ezinye izinto.
Ngisho nezimoto eziqine kunazo zonke zingasizakala ezindaweni zethu zokuhlala ezimibalabala ezingaphandle. Ngohlaka olulula lokwakha uhlaka lwensimbi nesokuqina, amanzi ne-UV yokulwa i-Pe (polyethylene) isembozo sezinto ezibonakalayo, le carport inikezela ngezokuphepha izindleko ezinhle kakhulu. I-anchor kit yale carport esindayo inezela isiqinisekiso sokuthi imoto yakho ihlala iphephile ngezinhlobo ezimbi zesimo sezulu. Azikho izinkathazo uma ushayela iloli elikhudlwana noma iSUV, njengoba zombili izindawo zokukhosela izimoto zilinganisa i-10 'L x 20' W, yakhelwe izimoto ezinkulu kakhulu. Sikunikeze embozwe maqondana nesitoreji sezimoto ngokunikela ngokuvikelwa okuphelele kusuka ezintweni zesimo sezulu esinzima ngentengo efinyelelekayo.
Okwenziwe i-PE okuqinisekisiwe yi-Tear-proof, Waterproof ne-Anti-UV. Indwangu Yesembozo Yezimboni yezimboni yokuqina okuhlala isikhathi eside nokuvikelwa.
Izindonga ezisetshenziswayo ezimbili ezisuswayo ezinamafasitela acacile wesitayela sefenisha, futhi iwindi ngalinye linekhava yewindows ngaphandle evumela ukukhanya ngaphakathi
Ikhwalithi ephezulu, isisindo esisebenza ngensimbi yensimbi.Rust & luhlaka lokulwa nokugqwala. Isigxobo ngasinye sensimbi sinezinkinobho zokudonsa ngokunamathisela izigxobo ngokushesha futhi sizigcine zisendaweni. Ama-tarps amhlophe anikeze izimbobo kusengaphambili ukunamathisela intambo bungee ngokusebenzisa futhi baqiniswa grommets ukuvimbela tarp kusuka ukuqhuma. Izintambo ezihlanganisiwe zilula ukugoqa ngokusebenzisa izimbobo bese zilula izingongolo zensimbi ukuze zivikeleke.
Ufaka uhlu lwereferensi yakho. Ngokwengeziwe, isethi ngayinye sizofaka ukufundiswa kokuhlangana ebhokisini ukuze kube lula kuwe.
Esedlule: IPulasitiki Emhubheni Green House Yezolimo 6x3x2m
Olandelayo: Amatende Angaphandle Okuthengiswa Okushisayo Kwimicimbi Yephathi
Indawo Yokupaka Imoto
Itende Legalari Yemoto
Izakhiwo Zangaphandle Zemoto
I-Canopy Car ephathekayo ngePompo ye-Waterproof 10'x2 ...